Compact and Repair i-Access Access Database yakwa-2013
Indlela yokudibanisa nokulungisa i-Database Access
Iingcebiso eziNcedo zokuSebenzisa nge-Microsoft Access 2010 kunye ne-2013 yolwazi
Ngokuhamba kwexesha, i-Microsoft Access yolwazi yeenkcukacha zikhula ngobukhulu kwaye isisebenzise i-disk space ngokungadingekile. Ukongezelela, ukuguqulwa okuphindaphindiweyo kwifayili yedatha kungabangela ukonakala kwenkohlakalo. Lo mngcipheko ukwandisa iinkcukacha ezibelwana ngabasebenzisi abaninzi phezu kwenethiwekhi. Ngako oko, yinto efanelekileyo ukuqhuba ngokukhawuleza isixhobo se-database kunye nokulungisa ukuqinisekisa ukulandelelana kwedatha yakho. Unokuphinda ukhuthazwe yiMicrosoft Access ukwenza ukulungiswa kwedatha ukuba i-injini yedatha ihlangabezana neziphene ngaphakathi kwefayili.
Kule nqaku, sihlolisisa inkqubo omele ulandele ukuqinisekisa ukusebenza kakuhle kweziko lakho leenkcukacha.
Ukuqulunqwa kwexesha kunye nokulungiswa kweenkcukacha zokufikelela kufumanekile ngezizathu ezibini. Okokuqala, iifayile zeenkcukacha zoFumanelo zikhula ngobukhulu ngexesha. Ezinye zezi zikhula zingabangelwa kwedatha entsha kwi-database, kodwa enye ukukhula kuvela kwizinto zesikhashana ezenziwe ngedatha kunye nesithuba esingasetyenziswanga kwizinto ezicatshiwe. Ukudibanisa i-database ibuyisela le ndawo. Okwesibini, iifayile zeenkcukacha zedata zingabonakaliswa, ngakumbi ezo fayile ezifakwe ngabasebenzisi abaninzi kwi-intanethi yoxhumo lwenethiwekhi. Ukulungiswa kwedatha kuyilungisa imiba yenkohlakalo yokuvumela ukuqhubeka nokusetyenziswa ngelixa igcina ubugcini be-database.
Eli nqaku lichaza inkqubo yokudibanisa nokulungisa i-Access Access database. Amanyathelo afana nalawa asetshenziselwa ukuhambelana nokulungisa i-database ye-Access 2010.
Ukuba usebenzisa inguqu yangaphambili yeMicrosoft Access, nceda funda iCompact and Repair i-Database Access 2007 .
Imizuzu engama-20 (iyahlukahluka ngokuxhomekeka kubukhulu besiseko)
Ngaphambi kokuba uqale, qiniseka ukuba unayo yokugcinwa kwedatha yangoku. Ukulungelelaniswa nokulungiswa kuyinkqubo ebalulekileyo kakhulu yokusebenza kwedatha kwaye inakho ukudala ukungaphumeleli kwedatha. Ukugcinwa kwemali kuza kuba luncedo xa oku kwenzeka. Ukuba awuqhelani nokuxhasa iMicrosoft Access, funda Ukusekela i-Microsoft Access 2013 Database .
Ukuba idesitenti ikhona kwifolda ebelwanayo, qi niqiniseke ukuba ufundisa abanye abasebenzisi ukuvala isiseko ngaphambi kokuba uqhubeke. Kumele ube ngumsebenzisi kuphela ovimba basebenzi ukuze uvule isixhobo.
Kwi-Ribbon yokufikelela, hamba kwi-pane ye-Tools Tools.
Cofa kwiqhosha elithi "Compact and Repair Database" kwiCandelo lezoTyhulwa kwifowuni.
Ufikelelo luza kufaka "iDatabase yokuCwangcisa kwi-Ibhokisi yencoko. Jonga kwi-database ofuna ukuyifumana kunye nokulungisa kwaye uklikha iqhosha leCompact.
Ukubonelela igama elitsha kwiziko leenkcukacha ezixubileyo kwi "Ibhokisi leNgcaciso kwiBhokisi" kwibhokisi yencoko, uze uklibanise iqhosha lokugcina.
Emva kokuqinisekisa ukuba i-database edibeneyo isebenza ngokufanelekileyo, cima i-database yasekuqaleni kwaye iqambe igama leenkcukacha ezigciniweyo kunye negama le-database yesiseko. (Eli nyathelo likhethiweyo.)
Khumbula ukuba i-compact nokulungiswa kwakha ifayile entsha yedatha. Ngoko ke, nayiphi na ifayile ye-NTFS imvume oyifake kwi-database yasekuqaleni ayiyi kusebenza kwi-database ehlanganisiweyo. Kungcono ukusebenzisa ukhuseleko lwezinga lomsebenzisi esikhundleni seemvume ze-NTFS kwesi sizathu.
Akusiyo ingcinga embi ukulungiselela amacandelo okugcina kunye nokusebenza okucwangcisiweyo / ukulungiswa ukuba kwenzeke rhoqo. Lo ngumsebenzi oqaqambileyo wokumisela kwisicwangciso sakho sokugcinwa kwe-database.
Ingaba ufuna ntoni:
Microsoft Office Access 2010; okanye
Iifom zokuHlola kwi-Microsoft Access 2013
I-Microsoft Access 2003 Tutorial yokudala ifomu
Indlela yokufaka iMicrosoft Access 2013
Ukuguqula i-Excel Spreadsheet kwiDatabase ye-Access 2007
Ukuprinta iiLebhile zokuLawula kwi-Microsoft Access 2013
Indlela yokudala iDatazi ukusuka kwi-Scratch ku-Access 2007
Ukunyameka kwe-Chi-Square yovavanyo lwe-Fit
Ukuguqula i-Database Access kwiSQL Server
Imijelo kunye neeSketchbooks zabaculi abaziwayo
IYunivesithi yaseHawaii kwi-Manoa Admissions
Iilwimi zesiTaliyane ezixubileyo: Trascorrere
10 IMfazwe Yehlabathi II Iimfazwe Omele Uzazi
I-System Pass Pass yeKlasi
Ukuchaza 'Ubuso obuvulekileyo' (okanye 'Vula Clubface') eGoli
Indlela yokusebenzisa i-Acrylic Painting Texture Medium
Iingcaphuno ze-25 ye-Wedding Anniversary Toast
Iiprogram ze-6 ze-People With Dyslexia
"I-Dumb ne-Dumber" iiCotes zeMifanekiso
Indlela yokufumana uMqulu kwiThupha yoVavanyo
Indlela Yokwenza Imithandazo YamaSilamsi Yemihla ngemihla
Cómo ufumane unobumba be-certificate de nacimiento
IYunivesithi yaseNyakatho ye-Illinois GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ukudibanisa iJerb verbhen Verstehen
Imbali kunye nokuBaluleka kweDiwali, uMthendeleko weeLanga
I-Pasaporte americano - Yonke into endiyiyo
Indlela yokuSombulula imisebenzi yokuLawulwa kwemiSebenzi
IsiNgesi saseMzantsi Afrika
Konke Ngo-Italo Calvino "Amadolophu Angabonakaliyo"
14 I-Hilarious 'Game yeZihlalo zobukhosi
Imbali eyi-10 yeGurus yeSikhh
ULeonard Nimoy Wafa Uthiyile uWilliam Shatner